Buy Car Rareview Display Monitor (24,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
Car Rareview Display Monitor
၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိနေသောရက် : 241ရက်​
ကြည့်သူအရေအတွက်: 428 (+1)
ယခုမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ပစ္စည်းလေးကတော့ 4.3 Inch HD LCD Color Display Monitor လေးပဲဖြစ်ပါတယ်
Auto Car Parking System အတွက် အလွန်အထောက်အကူပြုပြီး Monitor Display မပါဝင်သော ကားများအတွက် အလွန်အသုံးဝင်လှပါတယ်။
လူကြီးမင်းရဲ့ ကား ပါကင်ထိုးဖို့အတွက် ဇက်ကြောပြတ်အောင် နောက်လှည့်ကြည့်နေရပါသလား???
ထိုဖြစ်ရပ်မှ ကင်းဝေးစေဖို့ ကျွှန်တော်တို့ Rocket Online Shopping မှ ရောင်းချပေးနေတဲ့ ကားနောက်မြင်ကွင်းမော်နီတာ (Car Rareview Display Monitor ) ကိုဝယ်ယူလိုက်ပါ။
Smart ကျကျ အိနြေ္ဒရရ နဲ့ car parking ထိုးနိုင်ပါပြီ။
ယဉ်မတော်တဆ ဖြစ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေဖို့ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လုံခြုံရေးကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပါ။
Video , Photo, Music Player များကို Screen ပေါ်တွင် HD အနေဖြင့် တိုက်ရိုက်ကြည်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
ကားအနောက်ဘက် ကင်မရာ စနစ်ဖြစ်တာကြောင့်တိကျသောမြင်ကွင်းကို ဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူအတွက် သုံးရလွယ်ကူအောင် အလွန်ပင်ရိုးရှင်းပါတယ်။
အသုံးပြုပုံ video link ....
How To Install Car Rareview Display Monitor and Backup Parking Camera
- Voltage:DC 12V-24 (12V in car)
- Working Temperature (Deg. C) -20℃~ +70℃
- Power Cost: Max5W.
- Display Resolution: 480 RGB*272.
- Video Input:2Way Video.
- Display Mode: 4.3" LCD TFT.
- Very easy to intall it.
ဈေးနှုန်း – 24000 kyats
Display Monitor နှင့် Rear Camera (2) မျိုးတွဲယူပါက
ဈေးနှုန်း - 50000 (ငါးသောင်းကျပ်တိတိ ) ဖြင့် လျေ့ချပေးပါမည်။
Open Time-9am To 5pm(ဆိုင်ပိတိချိန်တွင် ဖုန်းများလဲပိတ်ထားပါသည်။)
Sunday နဲ. အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက်များ ပိတ်သည်။
09264686461 (MPT) also viber
09961127000 (Ooredoo) also viber
09768484878 (Tel) also viber
ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။
09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။
ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့်
အမည်: Car Rareview Display Monitor